အိမ်ရှင်မများအတွက်အားကစားပြိုင်ပွဲ: နာမည်ကျော်တစ်ဦးပြန်လည်သုံးသပ် - ဂိမ်းပြဿနာများ - 2019
ဒါဟာဒါကြောင့်ပုံမှန်ကွန်ပျူတာကစားသမားများ၏ပုံရိပ်ကိုပိုပြီးလေ့အဆက်မပြတ်သူက virtual Arcade, မဟာဗျူဟာနှင့်အွန်လိုင်း RPG အပေါ်သုံးစွဲရသောအခမဲ့အချိန်သမုဒ္ဒရာနှင့်အတူနေအိမ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သို့မဟုတ်လုလင်ကိုကပ်နဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ သို့သော်ဤကွန်ပျူတာဂိမ်းကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ်မရွေးအမျိုးသမီးဆွဲဆောင်ကြသည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်တွင် - ပင်ဂန္ထဝင်အိမ်ရှင်မလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဗီဒီယိုအမျိုးအစားစီမံကိန်းများပါဝင်သည်ရသော, kiberrazvlecheniyami entertaining သူတို့ရဲ့အားလပ်အချိန်ဖြုန်းဖို့လိုလားကြပါတယ်။
(ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်မိမိတို့ကိုယ်ကမသိဘဲကြောင်း), နှင့်ရိုးရှင်းသော, browser ကို-based application များအတွက်ကြီးမားသော-ဘတ်ဂျက်ကို PC ဂိမ်းတွေ - အိမ်နှင့်အမိန့်ဂရုစိုက်နေတဲ့သုံးဆ-ဟေးစီမံကိန်းများတွင်ကစားနိုင်သူ Ladies ။ လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ဝယ်လိုအားအတွက်အိမ်ရှင်မတွေအတွက်ဘာဂိမ်းတွေရှိပါသလဲ
The Sims စီးရီး
ဘရောက်ဇာကို applications များ
avatar - အိပ်မက်စစ်မှန်တဲ့လာရှိရာကမ္ဘာ
ကြီးမြတ်ဂိမ်း for Windows အတွက်, ဒါပေမယ့်လည်း video game consoles စအဘို့မသာထုတ်ပေးခဲ့ကြရသောလူသိများတဲ့ကြီးတွေ-ဘတ်ဂျက်စီမံကိန်းများဖြစ်ကြသည်။
ဘဝက The Sims အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးမိန်းကလေးများနှင့်အတူရေပန်းစားသည် simulator ။ အဆိုပါဂိမ်းဂိမ်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌မဆိုရှုပ်ထွေးသောစီမံကိန်းကိုကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိပါ: သင်အလွယ်တကူနဲ့အလိုလိုဇာတ်ကောင်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုနားလည်နိုင်ပါတယ်။ အရာအားလုံးကိုစောင့်ရှောက်တာမှနေသားတကျနေသောမိန်းမတို့, စံပြလူနေမှုအခြေအနေများဖန်တီးရန်ဖြစ်ကောင်းတစ်မိသားစုလုံးလူတစ်ဦး၏ထိန်းချုပ်မှုကိုယူသို့မဟုတ်: သမုဒ္ဒရာစာသင်ခန်းပရိဘောဂကိုဝယ်က virtual world ထဲမှာနွေးများနှင့်သဟဇာတဆက်ဆံရေးဖန်တီးနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူတွေ့ဆုံပျော်မွေ့။ ဒါဟာအများဆုံးရေပန်းစားသည် The Sims အဘယ်အစိတ်အပိုင်းကိုသေချာနှင့်အတူဆိုရရန်ခက်ခဲပါ! အခုတော့အဲဒီမှာ4လတ်ဆတ်တဲ့ The Sims နှစ်ဦးစလုံး၏ဝါသနာနေသောကစားသမားတွေအများကြီးတည်ရှိလျက်, ကောင်းသောဟောင်းဒုတိယ Sims ကစားခဲ့သည်။
ကို virtual ဇာတ်ကောင်, သင်အသေးဆုံးအသေးစိတ်ကိုဖို့အသွင်အပြင်ကိုချိန်ညှိအဖြစ်သူတို့ရဲ့ဇာတ်ကောင်စရိုက်များ, ပန်းတိုင်နှင့်စပ်ဆိုင်သောစိတ်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်
podnadoevshy Browser-ခြံအစားထိုးဘို့အရှိဆုံးအဆင့်မြင့်အိမ်ရှင်မတစ်ဦးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ Stardew ချိုင့်လာ၏။ ဒီဂိမ်းကိုသင်၏ဥယျာဉ်, ဖောက်မွေးမြူရေးစိုက်နှင့်ငါးဖမ်းသွားကြဖို့ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ အရာအားလုံးအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ပုံရသည်, ဒါပေမယ့်ဂိမ်း၏နာရီဝက်အကြာတွင် Stardew ချိုင့်ကိုလည်းစာသားသူတို့ရဲ့အများအပြားလျှို့ဝှက်ချက်များကိုသင်ယူဖို့, မိတ်ဆွေများအောင်အိပ်မက်မက်ရာအသက်ရှင်ကမ္ဘာတဝှမ်းနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်ကောင်နဲ့အတူတစ်ဦးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဂိမ်း storyline, ကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစှဲအလွန်လှညျ့စားဖြစ်ပါတယ်။ Stardom ချင်ကြပါဘူးအချိန်ကြာမြင့်စွာချိုင့်စွန့်ခွာလျက်, နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားမွေးမြူရေး parsnip နောက်ခံသို့ထွက်သွား, ဘောင်းဘီ bunglers မြို့တော်ဝန်ကိုရယူရန်လမ်းပေးခြင်းနှင့်ဒေသခံခွေလငျြခရီး၏ဘဝပုံပြင်များကိုနားထောင်။
ဂိမ်း၏အနှစ်သာရ: အဇာတ်ကောင်က၎င်း၏နယ်နိမိတ်, ဂရုစိုက်ဖို့တိုးတက်လာဖို့နဲ့ချဲ့ထွင်ထားပြီးဖြစ်သောလယ်ယာ, အမွေ
အိမ်ရှင်မများအကြားရုံမှိုင်းခြင်းနှင့်နှေးကွေးသောဂိမ်းမခံမရပ်နိုင်မည့်သူများအားရှိပါသည်။ တက်ကြွစွာများအတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် MOV သေနတ်သမား Overwatch ရှိသေး၏။ ပြောင်လက်တောက်ပသောမိန်းမပျိုသူမ၏ပုံစံ, စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်ကောင်များနှင့် entry ကိုတစ်ဦးအလွန်နိမ့်တံခါးခုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးဂိမ်း, ။ ထိုအခါသင်သည်အညစ် Handzo အဘို့ကစား, သင်ကျွမ်းကျင်မှုရိုက်ထည့်အပေါင်းတို့နှင့်တကွလမ်းညွန်အတွက် headshots ထွက်လိုက်တာနဲ့ start ကိုဘယ်လိုသတိထားမိကြပါဘူး။ သင်၏နှလုံးမီးဖြစ်၏, သူ၏စိတ်နှလုံးသည်စစ်တိုက်ခြင်းကြင်နာခြင်းလြှငျ, Overwatch ကြိုးစားကြရန်သေချာစေပါ!
Overwatch အရေးပါကောင်းချီးလက်ခံရရှိ - အကဲခတ်များဇာတ်ကောင်, ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဂရပ်ဖစ်များနှင့်ကောင်းတဲ့ဂိမ်းအမျိုးမျိုးမှတ်ချက်ပြု
အချို့လူများကကအိမ်ရှင်မစီးရီးကိုအလွန် ချစ်. ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ ကောလာဟလသူတို့အခမဲ့အချိန်အများစုကိုဖြုန်းအဲဒီ Add စောင့်ကြည့်ကရှိပါတယ်။ သို့သော်အချို့စိတ်အားထက်သန် mnogoepizodichnymi ဝတ္ထုနှင့်ကွန်ပျူတာဂိမ်းပေါင်းစပ်ဖို့လမ်းတွေ့ပြီ။ အဆိုပါကစားသမား၏အဓိကဇာတ်ကောင်ဘို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီအပြန်အလှန်စီးရီးအတွက်ကိုကူညီပါ, သင်ပြုနှင့်သူ၏တင်ပါတယ်တုံ့ပြန်ရန်မည်သို့မည်ပုံလိုအပ်ပါတယ်။ ဘဝကထူးဆန်းဖြစ်ပါသည် - မိမိခေါင်းကိုအတူကြံစည်မှုအတွက်တင်းကျပ်မည်ကိုကိုအကောင်းဆုံးဂိမ်းတွေထဲက။ ဤစီမံကိန်းဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ setting ကိုနှင့်အံ့သြဖွယ်သတ်မှတ်ထားသောဇာတ်ကောင်ရှိပါတယ် - သူတို့ပင်ပထမဦးဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်ချစ်လိမ့်မည်။ တစ်စုံတစ်ဦးက, ဖြစ်ကောင်းပင် girly ဒီဂိမ်းကိုခေါ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဖန်တီးမှုအကြား Square Enix ပရိတ်သတ်များအတိမ်အနက်နှင့်အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုသိတယ်သူကိုထိထိမိမိပုံပြင် Maxine မိန်းကလေးတန်ဖိုးထား, ယောက်ျားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
ဖြစ်ကောင်းငါ၏အကလေးဘဝအတွက်လူတိုင်းအရာအားလုံးကိုသင်ကသူ့ကိုကြောင့်ချင်တဲ့လမ်းအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မြို့, တညျဆောကျဖို့အိပ်မက်မက်။ ဂိမ်းမြို့ကြီးများ: Skyline သင်မြို့တော်ဝန်၏ရုံးခန်းယူဆနှင့်သင့်မြို့တော်တည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်း, ပေမယ့်, မတစ်ဦးမြို့တော်, ဒါပေမယ့်လှပသောသဘာဝနှင့်မြောက်မြားစွာဥယျာဉ်နှင့်အံ့သြဖွယ်ရှုခင်းများရာအရပ်အရပ်၌သန့်ရှင်းသောလေထုကိုအတူငယ်လေးတစ်ရွာဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျအထိ! ဂိမ်းကစားသည့်စင်ပေါ်အပေါ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ပို့ဆောင်မှုနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းအပေါ်, မြို့အနေထိုင်သူများ၏လုံခြုံရေးကိုစဉ်းစားရန်ရှိသည်ကြောင့်အဆိုပါဂိမ်း, လုံလောက်သောအခွင့်အလမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုပေးသည်!
အဆိုပါကစားသမား, လမ်းအခွန်များနေရာချထား, စည်ပင်သာယာန်ဆောင်မှုများနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏လုပျငနျးဆောက်လုပ်ရေးဒေသများစီစဉ်တာဝန်ရှိသည်စုစည်းနေသည်ကမြို့တော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်၏အဆငျ့, လူဦးရေ, ကျန်းမာရေး, ပျော်ရွှင်မှုကို, နေထိုင်သူများ၏အလုပ်အကိုင်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်
သူတို့တစ်တွေကို PC သို့မဟုတ် tablet ပေါ်မှာကစားနိုင်ပါတယ်ကတည်းကဒီလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာတွေကို, အိမ်ရှင်မအကြားအလွန်ရေပန်းစားဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကပင်နောက်ထပ်အစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းဖို့မလိုအပ်ပါဘူး - အရေးအကြီးဆုံးကတော့, အင်တာနက်များအတွက်ဆပ်ဖို့မမေ့မလြော့ပါ!
တစ်ခုကစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် browser ကိုဂိမ်းနဲ့အမှန်တကယ်ကို virtual အသက်ရှင်ခြင်းသို့ထိုးရန်ကစားသမားများပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ကဲ့, ဒီ application ကိုမှဧည့်သည်များကြီးမားတဲ့နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာရန်သူ၏ဒုတိယ "ငါ" ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ, မိတ်ဆွေများနှင့်တွေ့ဆုံရန် chat, အဝတ်ပြောင်းလဲသင့်အိမ်တပ်ဆင်ရန်နှင့်ပင်လက်ထပ်ရနိုင်ဘယ်မှာ! အဆိုပါဂိမ်းမိတ်ဆွေများကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်စုံလင်သည်နှင့်ပျော်စရာချက်တင်နထေိုငျ!
အဆိုပါစွန့်စားမှုအတွက် Play နဲ့ကိုယ်စားပြုပုံကိုမရရှိနိုင်အလုပ်, အပန်းဖြေခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေး, ရွေးကောက်တော်မူသောလယ်ပြင်၌အခွက်တဆယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်တိုးတက်မှုများမှာအပြင်ကိုသင်ထီပေါက်အနိုင်ရဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်
ပုလင်းအဘယ်ဂိမ်းကိုသိတဲ့သူတွေကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်ဟု VKontakte ပျော်စရာလျှောက်လွှာ။ ဒီနေရာတွင်, သင့်အခမဲ့အချိန်ပျော်စရာဖြုန်းမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်လုပ်ပင်မေတ္တာတော်ကိုရှာတှေ့နိုငျ! ကြီးမားတဲ့စားပွဲအသီးအသီးပါဝင်သူအခြားကျပန်းကစားသမားမှကိုယ်ချင်းစာကိုပြသလိမ့်မည်။ အဘယ်သူသည်ဆက်သွယ်ရေးရဲ့ start ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်လတံ့သောအရာကိုသိတော်မူ၏။
အဆိုပါလူမှုကွန်ယက်ပုလင်းထဲမှာဂိမ်း၏ဂန္ထဝင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလေးစားလိုက်နာကြသည်: ကနမ်းငြင်းဆန်တစ်ခုသို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒဖြည့်ဆည်းဖို့ဖြစ်နိုင်, ကအားလုံးကိုသင်အကြိုက်ဆုံးလမ်းကြောင်းများပါဝင်သည်သို့မဟုတ်ကို virtual ပန်းစည်းပေးနှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သူတစ်ဦးဦးမှတစ်ဦးပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းစကားရေးသားဖို့ဖြစ်နိုင်
အဆိုပါ Pirates ၏ဥစ္စာဘဏ္ဍာသည်၎င်း၏နာမည်ဖြင့်လှည့်ဖြားခြင်းကိုမသငျ့သညျ။ ငါတို့ရှေ့မှာတစ်ဦးဂန္စွန့်စားမှုဂိမ်းနှင့်စီးရီး '' သုံးလုံးတတန်းအတွက်တစ်ဦးရိုးရှင်းသောနည်းနည်းဂိမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ " တစ်နည်းနည်းနဲ့ပင်လယ်ဓားပြဆောင်ပုဒ်ကျေနပ်ပရိတ်သတ်တွေဟာလူမှုကွန်ယက်၌ထိုင်ရှိပါတယ်! ဒီဂိမ်းကိုအံ့သြဖို့တကယ်တတ်နိုင်သည်နှင့်မကြာခဏပဟေဠိစိန်ခေါ်ဂိမ်းကစားလှဲ။ , သင်လိုအပ်သောအရာကို - သင်အလျင်အမြန် Pirates ရတနာအဖြေရှာတဲ့လိုပါက!
ဂန္ထဝင် "ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးလယ်ယာ" မရှိတော့အိမ်ရှင်မများကအံ့အားသင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုအသစ်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုဂိမ်းစိတ်ကူးများ Give! ဂိမ်း Nano လယ်ယာ၏ developer များကသူတို့ကိုရှာတွေ့နိုင်! ဂန္ mechanics ရဲ့ခေတ်သစ်အမြင် browser ကို-based application ကို VKontakte ၏အသုံးပြုသူများနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရေပန်းစားသည်ပါဘူး။ မိန်းကလေးငယ်များ - nano-လယ်ယာကမ္ဘာတဝှမ်းထက်ပို7သန်းသုံးစွဲသူများသူတို့ထဲကအများစုဟာရှိပါတယ်။
ဂိမ်း၏အနှစ်သာရကြီးထွားဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, သစ်သီးများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအမျိုးမျိုးတို့ကို, အပတ်စဉ်ထုတ်လုပ်မမျှော်လင့်ဘဲနှင့်အမျိုးမျိုးသော updates များကိုစိုက်ပျိုးရန်ဖြစ်ပါသည်
အများစုကတော့တစ်နည်းနည်းဂိမ်း - က desktop ပေါ်မှာတစ်ကို virtual ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤအစီအစဉ်များကိုအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းနှင့် default အနေနဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားကို virtual Checker, စစ်တုရင်, backgammon, solitaire ပါဝင်သည်။
အခြားကိစ္စများအတွက်အချိန်အများကြီးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောသူကဲ့သို့ solitaire များအတွက်အားလပ်ချိန်အပန်းဖြေဖြုန်းနေကြတယ်။ အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အတွေ့အကြုံကို - အမြင့်ဆုံးအခက်အခဲပေါ်ရှိ "Solitaire" သို့မဟုတ် "ပင့်ကူ" ၌တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုဂိမ်းထဲကအပြန့်နှံ့စေရန်။ အိမ်ရှင်မဂိမ်းများကိုဂိမ်းရိုးရှင်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏လွယ်ကူခြင်းနှင့်မည်သည့်ဝန်၏မရှိခြင်းကိုဆွဲဆောင်: တအိုင်ကွန်ပေါ်ကလစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်!
solitaire ၏မွေးရပ်မြေတစ်ဦးမြင့်မြတ်သောခေါင်းစဉ်နှင့်အတူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနှင့်အကျဉ်းသားလောင်းကစားမည်သူမဆိုနှင့်အတူမရှိရာ Bastille ထောင်ထဲမှာ, ကျော်ကြားဖြစ်လာခဲ့သည်အဖြစ်ဂိမ်း၏လေ့လာမှုအများစုဟာပရိသတ်တွေစဉ်းစားသည်, သို့သော်မြေပုံရေးဆွဲခဲ့ကြသည်လက်, ထို့ကွောငျ့, သူတို့သည်းခံခြင်းလိုအပ်ကြောင်းအပြင်အဆင်ကိုဖန်တီးရန်စတင် - ဤ၏စကားလုံးဖြစ်ပါသည် အဲဒါကို "Solitaire" ကဲ့သို့အသံ -French
Alawar ထံမှစီမံကိန်းများရိုးရိုး, ပျော်စရာနဲ့ဖျော်ဖြေမှုကိုကြည့်။ စတူဒီယို - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများနှင့်စမတ်ဖုန်းများအတွက်အသေးစားနှင့်ပျော်စရာဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးဆဲသောအနည်းငယ်ရုရှားဂိမ်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတဦး။ အကောင်းဆုံးကိုစီမံကိန်းများကိုများထဲတွင်ထိုကဲ့သို့သောနာမည်ကြီး "Merry လယ်ယာ", "Masyanya", "ကမ္ဘာ့ဖလားခန့် 80 နေ့ရက်များ" နှင့်အခြားသူများအဖြစ်ထွက်ရပ်တယ်။
Alawar ဂိမ်းထဲမှာတာဝန်များကိုအမျိုးမျိုးပျင်းမရကြလိမ့်မည်, နှင့်မိတ်ဆွေများအမြဲတမ်းကယ်ဆယ်ရေးမှရောက်လာ
အများဆုံးစိန်ခေါ်မှုဂိမ်းတွေထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာတွေအတွက် Quest များစာရင်း။ သို့သျောလညျးကိုပင်မိမိတို့၏ရာထူးအတွက်ကစားသမားလာမည့်ဒေသသို့တိုးဖို့ဒါမှမဟုတ်အချို့သောမစ်ရှင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်မျက်နှာပြင်တ္ထုများနှင့်သဲလွန်စကိုကြည့်ဖို့ရှိသည်ဘယ်မှာ unpretentious စီမံကိန်းများဖြစ်ကြသည်။ အိမ်ရှင်မရှာပုံတော်တို့တွင်လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုမှာ Carolyn စိတ်အားထက်သန်ပုံပြင်များအပေါ်အခြေခံပြီးဖန်တီးခဲ့သည့်နန်စီ Drew ၏စီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းဟာတည်နေရာမှသဲလွန်စရှာဖွေနေ, ရာဇဝတ်မှုများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်သံသယရှိသူဆန့်ကျင်သူတို့ကိုအသုံးချပေးထားပါတယ်။
နန်စီ Drew စာအုပ်တွေ၏ပရိသတ်များကြားတွင်သာမကရေပန်းစားသည် - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Quest များအများအပြားပရိတ်သတ်တွေရဲ့နှလုံးသားများ avoevala လူငယ်တစ်ဦး syschitsa အကြောင်းကိုဂိမ်းစီးရီး
အဆိုပါ PC မှာဂိမ်းအရှိဆုံးအသေးအဖွဲဗီဒီယိုအမျိုးအစား One နဲ့ထူးချွန်ဂိမ်းကွာခြားပေမယ့်တာရှည်တစီးကိုတင်းကျပ်နိုင်မရကြကုန်အံ့။ ကစားသမားမဆိုကောက်ကျစ်မဟာဗျူဟာများနှင့်ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်အောင်မြင်ရန်နိုင်စွမ်းပေါင်းစပ်နိုင်စွမ်းသုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ Clickers clickers အပေါ်ပြီးတော့သူတို့က mouse ကိုခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အိမ်ရှင်မတစ်ခါတစ်ရံတွင်သင့်အကောင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာဖို့ပျော်စရာနှင့်ဂိမ်းများသစ်အဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိဖို့ကြိုက်တတ်တဲ့အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကိုရပ်တည်ချက်လှုပ်ခြင်းနှင့်မငြိမ်မသက်လှုပ်ရှားခြင်း, clicker လယ်သမား, Cookie Clicker နှင့် Epic သတ္တဝါ Hunter များထဲတွင်။
Clickers - စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာကိုကူညီခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းလိမ့်မည်ဟုအွန်လိုင်းဂိမ်းအသစ်တစ်ခုကိုအမျိုးအစား
အိမ်ရှင်မကွန်ပျူတာဖျော်ဖြေရေးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများများမှာ! ထိုအမြိုးသမီးမြားအဘို့အရွေးချယ်သောသူအချို့ဂိမ်းကယ့်ကိုအံ့သြခြင်းနှင့်များစွာသောနာရီနှောင့်နှေးနိုင်ပါတယ်။ အဘယ်သင်၏မိတ်ဆွေများကသင်၏မိခင်အဖွား, ညီအစ်မတွေနှင့်မိန်းကလေးတို့ပါဝင်သည်ဖွယ်ရှိသောအိမ်ရှင်မ, ကစားနေကြသနည်း မှတ်ချက်များအတွက်သင့်ရဲ့အဖြေကိုမျှဝေပါနှင့်သူတို့သည်သင့်တင်အရာကိုဂိမ်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြ!